Black Hat Marketing ary Nahoana no zava-dehibe ny manalavitra izany - Manaova fanatanjahan-tena
Black Hat SEO dia iray amin'ireo teknika ara-barotra mahatsikaiky indrindra. Ny fametrahana ny teny fanalahidy, ny fividianana rohy sy mpanaraka, ny famoahana lahatsoratra, ary ny fisintonana ny dokam-barotra dia tsy avela amin'ny alalan'ny tenifototra . Indrisy fa maro ireo webmasters mandray anjara amin'ny SEO mainty hoditra ary tsy mahafantatra akory fa ny tranokalany dia ho voasazy na voarara amin'ny Google, Bing, ary Yahoo.
Nilaza i Michael Brown, manam-pahaizana Semalt , fa raha maharay mailaka tsy tapaka ianao ary tratran'ireo namana sosialy, dia izao no fotoana hanovana ny paikady momba ny varotra. Raha tsy mety manaisotra ny fisintonana avy amin'ny tahiry na ny tranokalan'ny tranonkalanao ianao, dia mety hanohitra ny fitsipika sy ny fitsipika nataon'ny Komity Federaly Federal
Aza Mamindra Fo
Raha toa ianao ka mifaninana, dia mety tsy hahomby amin'ny Internet ianao. Na dia mandanjalanja ny tetikady SEO sy ny tetika ara-tsosialy aza ny mainty hoditra dia mety hitarika moter sy Facebook hanakanana ny mombamomba anao, misy ny fahafaha-miditra an-tsokosoko raha toa ianao ka mampihatra ny paikady mainty SEO. Fa maninona raha misafidy SEO fotsy fotsy izay tsara lavitra kokoa ary fomba tsara kokoa ahafahana mijery tsara karama fikarohana. Fantaro ireo fepetra sy fepetra momba ny varotra mailaka ary ampiharo azy ireny amim-pitandremana.
Fadio ny fananganana Craigslist
Zava-dehibe ny misoroka ny craigslist amin'ny vokatra lehibe. Tsy ho toy ny vahaolana amin'izany ianao, satria mety ho very ny lazanao ao amin'ny Internet. An-jatony amin'ny pejy an'arivony no voasokajy isan'andro, ary afaka manombana haingana ireo izay mikendry ny craigslist ireo milina karoka. ireo mpisolovava izay tokony hamaha ny olan'ny lalàna rehetra, noho izany dia tokony tsy hisakanana azy ireo ianao.
Aza mividy mailaka
Maro ny olona nandray anjara tamin'ny SEO mainty hoditra SEO nividy lisitra mailaka avy amin'ny mpivarotra sy ny tsena. Matokia ahy fa tsy fanao tsara izany ary mety hanimba ny tranokalanao amin'ny aterineto. Noho izany dia zava-dehibe ny tsy hividianana ny lisitry ny mailaka na dia sarotra aza ny vidiny. Raha tokony ho izany dia tokony hisarika ny olona ianao hisoratra anarana ho an'ny taratasinao sy ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny lalàna. Na raharaham-barotra lehibe na orinasa madinika ianao dia tsy tokony hividy ny mailaka sy ny lisitry ny varotra avy amin'ny loharano tsy fantatra. Fa tokony hamorona ny lisitrao ianao ary mandefa mailaka amin'ireo mpanjifanao sy orinasa tsirairay.
Tokony ho tsaroanao foana fa tsy misy fehintsoratra amin'ny fahombiazana. Noho izany, tsy ilaina ny mamitaka ao anaty aterineto satria ny fitaovam-pikarohana dia mety hamandrika anao mora foana. Raha tokony ho izany, tokony hifidy fotsy SEO hanohanana fifamoivoizana amin'ny tranokalanao ianao. Ampitomboy ny isan'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny lalàna sy ara-dalàna. Raha fintinina, tsy tokony hieritreritra ianao fa afaka mamonjy anao amin'ny aterineto ny fisorohana finday na ny media sosialy satria tsy izany no izy.
Raha ny SEO sy ny dokam-barotra mailaka mainty hoditra dia tokony ho fantatrao ny fototry ny antony tokony hisorohana izany. Aza mividy adiresy mailaka avy amin'olona, ​​ary aza mamerina ny lahatsoratrao mba hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana ny tranokalanao Source .